बच्चा मा दस्त - के गर्न को लागी?
युवा आमाबाबु अझै पनि बच्चाको स्थितिमा नेविगेट गर्न गाह्रो हुन्छ र व्यवहारमा तीव्र परिवर्तनले चिन्ता र पनि डरलाग्दो हुन्छ। बच्चाहरु को कुर्सी संग सम्बन्धित समस्या को बारे मा विशेष रूप देखि चिंतित। बच्चा दस्तुरलाई कुन कुरा मानिन्छ, र कुन अवस्था सामान्य छ र तुरुन्त हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्दैन?
बच्चाहरु मा दस्तिका को पहिचान कसरि - मुख्य लक्षण
जीवनको पहिलो वर्षमा बच्चाहरु मा, मल धेरै दिन, दस दिन सम्म पुगिन्छ। खास गरी जब बच्चाहरु मासु हुन्छ। कृत्रिम कृत्रिम कमै कम हुन्छ। वर्षको दोस्रो शताब्दीमा, बच्चाले चासो प्राप्त गर्न थाल्दा, त्यो पनि कम र अधिक सजायको मासु पम्प गर्न सुरु हुन्छ। तर एक वयस्क व्यक्तिको तुलनामा, दिनको समयमा मलहरूको संख्या अझै पनि लगातार छ - 3-5 पटक।
जब बच्चा उत्साहित र सक्रिय छ भने, सधैं जस्तै, यो बुखार छैन, र मलले पहेंलो, हरियो वा सुनको रंगमा र सानो मात्रामा मक्ख समावेश गर्दछ, यो बच्चाको लागि सामान्य छ, भित्ता तरल भइरहेको भए तापनि। तर अचानक उनको आवृत्ति 10-15 गुना बढी वा बढि, रक्त रेजिन, फोम, वा मल धेरै धेरै मासुमा देखा पर्यो, उसले बुढो र धेरै पानी बन्छ, त्यसपछि तुरुन्त एक डाक्टरलाई फोन गर्नु आवश्यक छ।
सानो बच्चाहरु मा देहाइड्रेशन धेरै चाँडै हुन्छ र यसको साथ सम्पूर्ण जीव बढाव को विषाक्तता हुन्छ, र ऊँची तापमान संग झुंड मा यो समस्या को कारण हुन सक्छ। अस्पताल भर्ना नगर्नुहोस्, किनकि यस्ता गम्भीर लक्षणहरूमा, घर उपचारले मात्र स्थिति जटिल गर्न सक्छ।
शिशुहरु मा दस्तक को कारण बनता छ?
आमाबाबु प्रायः बुझ्न सक्दैन किन बच्चा अचानक दस्त छ। त्यहाँ थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्। प्रायः यो नर्सिङ मासुको खाना खाने वा बच्चालाई नयाँ खानाको परिचयको उल्लङ्घन हो। बच्चामा नयाँ उत्पादनमा यो प्रतिक्रिया सम्भव छ। नियमको रूपमा, बच्चामा यस्तो दस्तुर बलियो छैन र उपचार सबै नयाँ उत्पादन रद्द गर्न र द्रव आपूर्तिको पुनरावृत्तिलाई कम हुन्छ।
दस्तुर भाइरस वा जीवाणुको कारण हुँदा स्थिति धेरै जटिल छ। यो धेरै दिन सम्म रहन्छ र उचित उपचार बिना बच्चाको अवस्था चाँडै बिग्रन्छ। डिसेब्याक्टेरियोसिस र लेक्टस कमिसनले अक्सर निराश पार्छ। बच्चामा दस्त हुँदा यी अवस्थामा कारणले गर्दा के गर्नु पर्छ, डाक्टरले निर्णय गर्नुपर्छ।
बच्चाहरु मा दस्तहरुको उपचार गर्न को लागी?
डाक्टरले आउँनुअघि बच्चालाई स्मिक्टा र रेजीड्रोनको सानो समाधान दिनुपर्छ । निर्जलीकरण रोक्न स्तनपानको प्रायः स्तनमा लागू हुन्छ। आमाबाबुको लागि अहिले सबैभन्दा मुख्य चीज बच्चाको पेय रिजिममेसनको निगरानी गर्न हो। यदि दस्त्राले बच्चालाई सफा एनेमा गर्न आवश्यक हुन्छ भने।
डाक्टरको नियुक्ति बिना, सोरबन्टको बाहेक कुनै पनि ड्रग नदिनुहोस्। उपचारको लागि, अवस्थाको गम्भीरता, एंटीबायोटिक्स, दबाइ रोक्न औषधिहरू, र प्रोबायोटिक्स आंतको फ्लोरा को सामान्यकृत गर्न निर्धारित गर्न सकिन्छ।
क्रलको लागि क्रटल चटाई
एस्पमजनलाई कसरी नयाँ नवजात दिनुहुन्छ?
कम्पासमा बच्चालाई लपेट गर्ने?
नयाँ नवजात केटीलाई कसरी धोएर?
बिना ताड तेल सूची
शिशुहरु मा एलर्जी - कसरी उपचार गर्ने?
नवजातको लागि सुपरस्टिन
बच्चाको मलमा रक्त
कृत्रिम खाना खाने9महिनामा बच्चाको मेनु
नवजातको तापमान 37
नवजात शिशुहरूको लागि शान्ाा कलर
एक खुट्टा मा गद्दे
गर्मीमा नवजातको साथ हिड्ने
फैशनेबल नाखून 2015
कागजबाट ब्लाइन्ड्स आफ्नै हातले
जीन्स पार्क - हर स्वाद को लागि स्टाइलिश महिलाहरु को जैकेट को 40 तस्वीरहरु
बगैचा हाइडrange को हेरचाह
ड्रैगनलाई मार्नुहोस् - ईर्ष्याको लागि उत्तम उपाय
गोसेबेरी - संघर्षको उपाय
आइसल्याण्डको राष्ट्रीय संग्रहालय
गृह कपडे - प्रसिद्ध ब्रान्डहरु को घर को लागि कपडे को सर्वश्रेष्ठ मोडेल
Trump को आसपास जुनून: वान Damme - को लागि, Hayek - "विरुद्ध"!
घरको मुखमा खिचिएको फ्रेम
चिकनी छालाको माइकोसिस
कपडामा लेमन रंग
बच्चाको अनुहारमा रमाईन्छ
Zara 2016 को नयाँ संग्रह
साइनसाइटिस र पाइनसिसाइट्स को लागि एंटीबायोटिक्स
सानो वजनको ठूलो रहस्य
ओवनमा टमाटर र पनीर संग चिकन
कैप्सूलमा ब्याजर फ्याट
शयन कक्षको गृह